Ogaden News Agency (ONA) – Siyaasada Arimaha Dibada Ee Itoobiya oo Dhulka Kudhacday.
Siyaasada Arimaha Dibada Ee Itoobiya oo Dhulka Kudhacday.
Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia ONA uga faalooda arimaha siyaasada ayaa sheegaya in siyaasadii arimaha dibada ee Itoobiya ay guud ahaan caalamka kagaadhay meeshii ugu hoosaysay marka laga eego halbeega lagu cabiro siyaasada caalamka.
Sida uu wariyuhu sheegayo waxaa sadexdii sano ee lasoo dhaafay aad hoos ugu dhacayay siyaasadii arimaha dibada ee Itoobiya iyo xidhiidhkii ay xukuumada wayaanuhu lalahayd wadamada aduunkan oo dhan.
Hoos udhaca arimaha diblamaasiyada ee taliska wayaanaha ayaa hoos udhacay kadib markii ciidanka gumaysiga Itoobiya ay si badheedh ah dad shacab ah ugu gaysteen dil, jidh-dil, dhac, kufsi, xidhay iyo cunaqabatayn wayn oo guud ahaan wadanka lagu soo rogay.
Dowladaha aduunka ayaa hoos udhigay sumcada wadanka gumaysiga Itoobiya iyo kalsoonidii dowlad nimo ee looyahay, waxayna dowladaha aduunku bilaabeen in ay si badheedh ah uga hadlaan dhaleecaynta saraakiisha sar sare ee wayaanaha iyo waliba hay’adaha kala duwan ee xukuumada wayaanaha.
Sidoo kale dowladaha daneeya arimaha Itoobiya iyo hay’adaha xuquuqda aadamaha udooda ayaa si wayn udhaleeceeyay dhaqanka xukuumada wayaanaha ee ku aadan xuquuqda aadamaha, warbaahinta madaxa banaan iyo waliba hay’adaha deeqaha bixiya oo aan loo ogolayn in ay galaan wadanka Itoobiya.
Falqeeyaha arimaha siyaasada ee Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa sheegaya in aan lasugaynin in siyaasada arimaha dibada ee Itoobiya ay kasoo kabato dhaawaca kasoo gaadhay dowladaha aduunka,